Nagu saabsan - Hebei Xingbei Birta silig mesh Products Co., Ltd.
Hebei Xingbei Birta Wire Mesh Products Co., Ltd. waxay ku taalaa Anping, hengshui, Shiinaha, oo ah shirkada Warshadaha & Ganacsiga Combo.
Sannadkii 1992, qalab casri ah iyo tayo tayo sare leh ayaa la soo saaray si loo dhiso wershad sawir qaadaysa; shirkadeenu waxay had iyo jeer u hoggaansameysaa suuqa u janjeedha, teknolojiyada sare sida xoogga wadista, ujeeddada hagaajinta tayada wax soo saarka, iyo adeegga wanaagsan ee iibka kadib ujeeddada.
Si buuxda u dhaqan geli heerka 'ISO9001', xooji maareynta gudaha ee shirkadda, raacdo heerka ugu sarreeya ee tayada wax soo saarka, iyo helitaanka taageerada tirada badan ee macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah.
Sannadkii 2007, ayaa wershaddu mar kale soo bandhigtay qalab cusub oo casri ah, shaqaaleysiisay tiro badan oo hibo ah, ballaadhisay warshadda, magaceedana u beddeshay Warshadda Mashiinka Jiingadda Birta ee Jiingadda ah ee Anping.
In 2014, Hebei Xingbei Birta Wire Mesh Products Co., Ltd. la aasaasay, iyo ganacsiga ayaa lagu sii balaariyay in ay gudaha iyo shirkad shisheeye.Our leeyihiin technology sare iyo qalab, maaraynta sayniska, iyo nidaamka xakamaynta tayada adag. Xingbei waxay khibrad buuxda u leedahay soo saarista iyo iibinta ciladaha birta, carqaladaha dhawaaqa, shabaqa FRP, shabaagta gabion, shabagyada ilaalinta jiirada, shabaqyada deedka, miirayaasha qaxwada, tuubooyinka qiiqa, iyo miirayaasha kale ee kala duwan ayaa loo habeyn karaa. Waxay sifiican ula kulmi kartaa baahiyaha macaamiisha xaga tayada, amaanka, quruxda iyo rakibida haboon. Wax soo saarka Xingbei ayaa si ballaaran loogu isticmaalaa meelo kala duwan. Kaliya maahan inay leeyihiin suuq iibin ballaaran oo gudaha ah, waxaa sidoo kale loo dhoofiyaa Ameerika, Australia, Yurub, Bariga Dhexe, Kuuriya, iyo dalal iyo gobollo kale. Khadadka wax soosaarka waxaa ka mid ah: mashiinka sawir qaadista mashiinka jarista-mashiinka alxanka elektarooniga ah oo isku laaban mashiinka-ciida rinji mashiinka-PVC faashad dahaarka mashiinka-galvanized (galvanized kulul galvanized) mashiinada rinjiga-budada-PVC. Xingbei waxay leedahay koox maareyn iibin xirfad leh oo heersare ah, laga bilaabo iibka ka hor, inta lagu guda jiro iibka iyo iibka kadib, xiriir kasta iyo hanaan kasta si adag ayaa loo tijaabiyaa loona xakameeyaa. Xingbei wuxuu si kal iyo laab ah u rajaynayaa inuu abuuro xiriir ganacsi oo muddo dheer la leh macaamiisha adduunka oo dhan iyadoo lagu saleynayo faa'iido daacadnimo iyo wada jir ah. Waa lagusoo dhaweynayaa booqashada shirkadeena.